Actorylọ ọrụ China Pickle Pot factory na ndị na-emepụta | Chuancheng
Zuru oke maka isi nri gị na achịcha gị dị ka pasili, pen, agwa a mịrị amị, osikapa, ọka bali, ọka, kọfị, kọfị, tii, mkpụrụ ma ọ bụ chekwaa mkpuru osisi, mkpụrụ osisi & akwụkwọ nri na nsị. Igwe eji esi nri kichin anyị dị mma dịkwa mma maka iwekwa ọkụ.
Ihe oriri echekwara ga-adị ọhụrụ ruo ogologo oge na mkpuchi ikuku anyị na mkpọchi silicone. Ibe doro anya na-enye gị ohere ịhụ ihe dị n’ime na otú echekwara nri si na-aga n’ihu.
A na-eji arịa ndị a na-eme nri, ihe na-adịgide adịgide ma na-ejikwa ya, dị ọcha ma na-adịghị egbu egbu, agaghị etinye kemịkal na-emerụ ahụ n'ime nri ma ọ bụ nwetakwa ire ụtọ mgbe ọtụtụ ojiji.
Akwa maka Canning - zuru oke maka ichekwa na ndị na-anụ ọkụ n'obi canning; a na-akpụkwa ite a, a na-echekwa ya maka mkpo ahịhịa ndị a na-ejikarị arụ ụlọ, piich, ose, jam, jellies, ihe nchekwa, sọks, salsa, broths na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nnukwu maka Nchekwa - Eco-friendly na reusable reserve nke nri akọrọ na nri dị ka shuga, osikapa, otis, ntụ ọka, pasta, kuki, crackers, na swiiti. Igwe mkpuchi ikuku nwere eriri larịị bụ plastisol na-akwụghị ụgwọ maka mkpuchi siri ike na-eme ka nri dị ọhụrụ ma na-agbatị ndụ ya. Osimiri ahụ bụkwa nnukwu ngwá ọrụ maka ihe ọ bụla rụrụ arụ ịchọrọ ịchekwa n'ụzọ siri ike.
Afọ mgbe nile - ọnụ nwere dayameta n ’sentimita abụọ na-eme ka ọ dị mfe idobe mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dịka beets na tomato n’ime ite ahụ. Nnukwu oghere a na-enye ohere ịnweta ala nke ite ahụ maka nhicha dị mfe yana nke ọma site na iji otu nhicha.
Ogo nke Iko-ahu nke eji akwa oromoku di elu nke mechiri emebi ma gbawaa. Iko anyị bụ igwe nri dịkwa mma ma microwave na - enweghị nchekwa. ite a dị 100% nri na-adịghị mma ma na-eduga-n'efu maka nchekwa nri na ọ beụverageụ ihe ọ healthyụ healthyụ dị mma.
Iko Kachasị Elu - A na-eji iko mason ọ bụla mee iko doro anya dị mma, nke na-emerụ emerụ iji hụ na ọhụụ kachasị dị na-ekwe ka ị nwee ike ịhụ ọdịnaya ọdịnaya jelii dị mfe ma chọpụta ma ha emebiwo. Mkpọ ndị a nwere ezigbo mma bụkwaaji ahụ zuru oke maka ịchọ mma na nka, ọrụ agbamakwụkwọ na mmemme oriri, na ọrụ DIY ndị ọzọ.
Nke gara aga: Kalama mmanụ a .ụ
Osote: Ihendori Sina
Karama Iko Maka Mpekere
Gilasi Pickle Akwukwo
Ogwe Nchekwa Pickle
Nri iko 130ml na ndị na-acha odo odo na-amị amị
Custom Round Food Mmanụ arageụ na ebe nchekwa Glas ...
Ose ọka ma ọ bụ nnu nnu
Crystal Candy Jar with Liid, Clear Glass food St ...